Ushaywe ngoswazi oluncane owatalabha umfana, 13, ngemvubu | News24
Ushaywe ngoswazi oluncane owatalabha umfana, 13, ngemvubu
Johannesburg - Umndeni womfana oneminyaka engu-14 ubudala owashaywa kanzima ngezinsolo zokweba iPlayStation uthukuthele ngokuthi inkantolo ihlawulise umsolwa imali engu-R300.
Lo mfana wayeboshelwe etafuleni enqunu washwaya kanzima ngemvubu abangani bakhe bebukele bethatha ivideo yesigameko esenzeka endaweni yaseTsoseng eduzane naseLichtenburg, eNorth West ngo-Septhemba ngo-2014.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe owe-ANCYL ngelokubulala intombi
Selokhu kwenzeka lesi sigameko lo mfana uthi kubuhlungu uma echama kanti futhi uhlezi elova esikoleni ngenxa yokugconwa ngabanye abafundi ngoba le video yasabalala.
Umsolwa owathweswa icala lokushaya ngenhloso yokulimaza uvele eNkantolo yeMantshi yaseDitsobotla ngoLwesine wadedelwa ngenhlawulo yemali engu-R300 kulandela ukuvuma icala.
Kule video ebonwe ngabe-SowetanLive lo mfana ushaywa ngemvubu imvimbo engu-24 eboshelwe etafuleni. Ngesikhathi le ndoda iqhubeka ishaya lo mfana uzwakala exolisa ethembisa nokuthi angeke aphinde antshontshe.
Ngemuva kwemvimbo engu-7 itafula livele lawa lo mfana ephezu kwalo, Le ndoda nabanye abafundi baliqubula base bephinde bembophela etafuleni yase iqhubeka imtalabha.